मनाङ पुगेका ओली: पूरा पढ्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् - Nayapul Online
मनाङ पुगेका ओली: पूरा पढ्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
dapoxetine without prescription, lioresal without prescription. असोज २५, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन नारा अघि सारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनाङ पुगेर स्याउ फार्मको उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाली जिल्ला मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा एग्रो मनाङ प्रालिले स्थापना गरेको स्याउ फार्म उदघाटन गरेका हुन् ।
लटरम्म फलेका स्याउ देख्दा प्रधानमन्त्री ओली निकै उत्साही भए । स्याउका दाना निकैबेर सुमसुम्याए । र, भने, ‘सञ्चारकर्मी साथीहरु, यो सुन्दर प्रयासलाई सबै नेपाली समक्ष पुर्‍याउनु पर्दछ । ता कि यहाँका किसान सफल व्यवसायी र उद्यमी बन्न सकुन् ।’
एग्रो मनाङले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने खालको उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिलाई उद्योगतर्फ लैजान सकिने धारणा राखे ।
यो वर्ष सरकारले स्याउ कृषकका लागि १० करोड अनुदान दिएको र एक लाख स्याउ बिरुवा वितरण गर्ने योजना रहेको पनि सुनाए । स्याउका विरुवाको माग अत्यधिक रहेकामा त्यसको पूर्तिबारे भने प्रधानमन्त्रीले केही योजना सुनाएनन् ।
घुस खानाले दशैँको बेला दशा लाग्यो उपसचिवलाई
विमान दुर्घटनामा २० यात्रुको मृत्यु ….
आमा बनिन् यूना , छोरीको नाम (साइरा)
चिन्तित रोनाल्डो पहेँलो कार्ड मात्रै पाएपछि मुस्कुराए
इन्डोनेसियामा ७ रेक्टरको भुकम्प ८२ जनाको मृत्यु